Kuvele elomhlathi uMasipala enikela ngezinsiza emphakathini | News24
Kuvele elomhlathi uMasipala enikela ngezinsiza emphakathini
Imenenja engeyesibili kwesokunxele imi nabezinhlangano zomfelandawonye emva kokubamukelisa ubuhlalu. Kwesinye imikhiqizo yezandla eyenziwa yile zinhlangano.PHOTO: supplied
UMASIPALA waseMkhambathini eCato Ridge uzoqopha umlando ngokuba ngowukuqala ongaphansi koMgungundlovu ukuba nombukiso wosomabhinisi.
Lokhu kudalulwe imenenja yalomkhandlu uNkk Thabisile Ndlela ngoMsombuluko ngesikhathi kwethulwa izinhlelo zentuthuko eMaqongqo. Kulo mcimbi uNdlela wethule amasaka obuhlalu abebuphathele izinhlangano zomfelandawonye ezibizwa ngama-cooperative ezingaphezu kwamashumi amabili ezenza umsebenzi yezandla.
Uthe yize umkhandlu wakhe ungeminye emincane nehlupheka kakhulu esifundazwe kodwa uzimisele ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane abakhe imifelandawonye ngenhloso yokuxosha ikati eziko. Uthe uhlela umbukiso wezamabhinisi kuwo lonyaka ukuze labomama abenza ubuhlalu nezingubo zesintu bakwazi ukuthola indawo lapho bezokukhangisa baphinde bazidayise khona.
“Sihlale phansi nabo basitshela ukuthi badinga sibalekelele ngokuthi sibathengele ubuhlalu ngoba bayathunga badayise futhi baqashisa ngawo uma kunemicimbi endaweni. Sibe sesibona ukuthi ukudayisa emawadini abo kuphela ngeke kubakhulise babe ngosomabhizinisi abakhulu, yingakho nje ngicabange ukuthi sakhe usuku lapho kuzohlangana bonke osomabhizinisi abangaphansi kwethu bakhangise futhi badayise ngemikhiqizo yabo,” kusho uNksz Ndlela osanda kuqashwa yilo masipala.
Uthe ngesikhathi bevakashele kulama wadi iningi labantu lacela kwimeya uNkk Thobekile Maphumulo ukuthi bafuna ukulima nokuzenzela imisebenzi yezandla ngakho-ke bengathanda ukulekelelwa ukuze bazimele. Imenenja inikezele ngembewu namageja okulima yase ikhumbuza umphakathi ukuthi uhulumeni wesifundazwe wamemezela ukuthi umuzi ngomuzi kumele ube ngengadi eyodwa okungenani lapho utshala khona.
UNkk Elizabeth Ndlovu ohola iSusi ikati eziko cooperative uthe bajabule kakhulu ngesimemezelo sikamasipala sokwenza usuku lapho bezokhombisa khona ngemiqhikizo yabo.
Uthe uyathemba lokhu ukuthi kuzobasiza kukhulise amabhinisi abo ngoba bazokwazi ukudayisela abantu abangaphandle kwamawadi abo. Uthe yize bekuthola ukweseka ewadini yabo ngabantu abasuke benemicimbi yesintu kodwa baye bakhale ngokuthi abanamali futhi bathatha ngesikweletu abanye babo bagcina ngokungabakhokheli.